Socdaalkii Maanta iyo Mashaariicaha Waawayn - Cakaara News
Socdaalkii Maanta iyo Mashaariicaha Waawayn
Q/dahar(Cakaaranews) Talaado, 6da September 2016. Kadib shirkii saaka ee dhagaxbuur ayay madaxwaynaha iyo waftigiisii balaadhnaa kubaqooleen wadada dheer ee laamiga qabridahar iyagoo tuulada sasabane uga leexday dhanka wadada jayga ah ee aada mashruuca biyo-xidheenka wayn ee waraabka beka.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaaminaya waftigii balaadhnaa ayaa halkaa kusoo kormeeray qaab-shaqeedka mashruuca beka oo si habsami leh usocday. Halkaas oo uu madaxwaynuhu kuladardaarmay hawl-wadeenada mashruuca inay dadajiyaan islamarkaana laban-laabaan shaqada maadaama uu xiligii roobku dhawyahay.
Kadibna, waxaa socdaalkan lagu soo kormeeray mashaariicaha biyo-xidheenada waraabka ee goomaar iyo wijiwaaji oo si aad ah shaqo adag uga socotay. Waxaana looga sii gudbay mashruuca wayn ee waraabka maraacaato oo isagu xaal-xaalkii lagu jiro. Waxaana caawa loo dheelmaday magaalada qabridahar ee xarunta gobolka qoraxey.